Trisquel 6.0 LTS GNU / Linux: Functional and Freedom | Avy amin'ny Linux
Trisquel 6.0 LTS GNU / Linux: Fiasa sy fahalalahana
freebsddick | | Fitsinjarana
Nanambady nandritra ny fotoana kelikely aho tamin'izay heveriko ho iray amin'ireo disko tsara indrindra eny amin'ny habakabaka GNU / Linux. Miresaka manokana aho Arch Linux, tamin'ny ankapobeny dia niaraka tamiko tao anatin'ny 3 taona tsy an-kijanona izy io nefa tsy nanao famerenana ny rafitra nandritra izany fotoana izany, tranga iray izay niteraka fifaliana tamin'ny fampiasana, ny fahafaha-mitantana ary ny fitoniana tanteraka.
Mpampiasa maro no hahita fa somary mahazo aina ny fampiasana azy Arch Linux Amin'ny maha rafitra birao ahy dia nomeko ny tenako ny mitady distro izay noheveriko tamin'izany fotoana izany ho safidy tsara ho an'ny mpampiasa birao. Ka tamin'ny fomba feno fahefana no nandehanako nijery izay nitranga Trisquel Gnu linux miroso amin'ny fisintomana ary mihazakazaka azy amin'ny maody livecd, mahita ny tenako miaraka amina fahagagana mahafinaritra raha oharina amin'ireo kinova taloha.
Ny mpizara Abrowser Ao amin'ny kinova 19.0, dia manana fahononam-po manokana sy fitoniana marobe, toetra izay tsy isalasalana fa ankasitrahana rehefa mandany ora maro eo alohan'ny PC, kamo tsy mitsahatra mijery horonantsary na amin'ny tambajotra sosialy.
Amin'ny alàlan'ny default, ny client multi-protokol efa niorina dia Pidgin 2.10.3 Mpanjifa fanta-daza izay tsy isalasalana fa mahafeno ny fepetra takiana rehetra momba an'io raharaha io.
Toy ny fizarana miorina amin'ny GNOME Manana rindranasa fanta-daza hafa izy ao anatin'izany:
Rythembox 2.6 (mpilalao mozika)
Brasero 3.4.1 (Disc Burner)
Gimp (2.6.12) Mpanonta sary
LibreOffice 3.5.7.2 (biraon'ny birao)
Totem 3.0.1 (Mpilalao horonan-tsary)
Rehefa dinihina fa ny rindranasa efa napetraka rehetra na dia eo aza ny faran'izay tsotra sy mahazatra izay efa napetraka ao amin'ny ankamaroan'ny disro, dia marihina fa ny mpilalao rehetra na ny mpamoaka horonan-tsary dia miasa ao anaty boaty, izay manome traikefa azo ekena ny mpampiasa mitady sehatra marin-toerana amin'ny asan'izy ireo isan'andro, miampy ny fahalalahana tanteraka arak'izay atolotry ny Fototra lozisialy maimaim-poana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Trisquel 6.0 LTS GNU / Linux: Fiasa sy fahalalahana
95 hevitra, avelao ny anao
Miorina amin'ny ubuntu 12.04, tsy misy grazie.
freebsddick dia hoy izy:
Mazava ho azy fa nihoatra ny lazainao ity lahatsoratra ity ... tsy hoe miankina amin'ny distro manokana io
Mamaly an'i freebsddick
Zagur dia hoy izy:
Miorina amin'ny Ubuntu 12.04 ary mihatsara amin'ny alàlan'ny fanesorana fonosana fananana mitazona anao. 😛
Valiny tamin'i Zagur
Angamba izany no iray amin'ireo zavatra izay tsy isalasalanao fa ho hitanao ihany koa, tombony ho azy izany fa tsy ny mpampiasa mitady ny manao computation normal fotsiny nefa tsy misy zavatra manokana dia afaka mankasitraka tokoa ireo toetra ireo, mazava ho azy fa fanampin'izany foana. hevitra, faly aho fa manana hevitra mazava momba izany ianao.
Notsapaiko tamin'ny fizarana netbook ity fizarana ity. Ary tsy maintsy milaza aho fa misy asa lehibe ao ambadik'izany (izay, eny, fizarana Espaniôla!). Noheveriko foana fa ny fampiasana fonosana maimaimpoana fotsiny dia mety ho olana. Eny, tamin'ny voalohany, zatra nampiasa Ubuntu sy derivatives, toa izany no izy tamiko, saingy avy eo (tamim-paharisihana) dia tsapako fa afaka mampiasa fomba hafa aho ary miasa tsara.
PS: Amin'izao fotoana izao ao amin'ny netbook-ko dia manana OpenSUSE aho, saingy mampiasa ny netbook-ko hizaha toetra karazan-doka rehetra.
raha hampiasa nvidia gt 670 miaraka amin'ny nouveau ianao dia fanatsarana .., eny .., ho an'ny loko tsiro ehehhe.
tsara kokoa noho ny fampiasana sis marina?
mitovy ihany ny fampisehoana .., na dia 300 dolara aza ny fandaniana hahaah
mbola Ubuntu io ...
Isaka dia hoy izy:
Misy distro mifototra amin'ny andohalambo maimaim-poana
Mamaly an'i isaac
Mazava ho azy fa misy ... saingy tsy maintsy miatrika an'ity fanontaniana manaraka ity ianao ... hatsipinao miaraka amin'ny fahalalana kely momba ny rafitra GNU hametraka an'i Parabola ny zanak'anabavinao? ... indrindra raha hanao izany, noho izany dia hanala blowjobs be dia be avy amin'ny mpametraka sary izay manelingelina sy mandany ny loharanon'ny milina fotsiny .. fa ny tsoriko dia tsy mahazatra ..
Ho an'ireo mpampiasa ireo, ny trisquel dia tsy safidy ihany koa, ireo mpampiasa ireo dia mila distro izay manao ny ankamaroan'ny fitaovany, ary tsy nouveau, na koa ny mpamily open source radeon no manao izany, ny hany olona mety ho faly dia ireo mpampiasa Intel.
Mampitahanao ny takiana aminao fotsiny ianao ary manonta izany amin'ny hafa.
Ampitahako ny zavatra takian'ny 90% mpampiasa pc :).
Satria miresaka momba ny mpampiasa Arch + mahazatra izahay dia manoro hevitra an'i Chakra aho.
Sep ... tsy hoe afaka milaza aho fa manana traikefa amin'ny distro ... toy ny tao amin'ny lahatsoratra nandritra ny taona maro izay fanarahana ny lalana mihodina izay omena ahy ihany no arahako, na ho an'ny mpampiasa hafa aza dia fantatro fa misolo tena ny Safidy ... amin'ny fomba manokana azoko atao ny manoro ny distro an'ny lahatsoratra momba ny fahafenoany rehefa tonga
Staff dia hoy izy:
Na Manyaro, izay manao asa tena tsara ary tsy manana ny filozofian'i Chakra purista.
hahahaha .. Tonga nijery fanehoan-kevitra toy ireny aho ... «Purista» haha
Farafaharatsiny nilazany fa purist momba ny KDE fa tsy momba ny fahalalahana
mpiasa dia hoy izy:
Ary inona no mampihomehy amin'ilay teny hoe "purist"?
Nampiasa ny fomba ratsy tamin'ny fomba ratsy ve aho sa valiny feno fepetra fotsiny izany fihomehezana izany?
Valiny ho an'ny mpiasa
Arch of chakra nisara-panambadiana taloha ela be. Manana ny toeram-pivarotany manokana izy ireo, ny fonosana dia tsy mifanaraka ary amin'ny disowatch dia voatanisa ho distro misaraka izy io. Mikasa ny hisolo pacman amin'ny akabei aza izy ireo.
Ho an'ireo izay te-hametraka arch mora, dia manoro hevitra ny Bridge Linux aho
Edo dia hoy izy:
Ny andohalambo ho an'ny olona tsotra dia Artengos na Manjaro, ity farany ity no fahazoako manoro hevitra
Mamaly an'i edo
Tsia .. raha fantatrao ny fiteny iray farafahakeliny izay ny dikanteny wiki (logiamente mahay mamaky amin'io fiteny io) ary manana fantsom-panondro roa farafahakeliny eo amin'ny tanana ankavanana sy ankavia, «Mortal» tsotra izao dia afaka apetraho ny distro tsy misy olana
Arch tsy voatery hoe ny tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao, ohatra tsy ho ahy.
Marihina fa efa taona maro no nampiasa Linux aho ary i Arch dia nisolo tena fandaniam-potoana foana ho ahy, na dia tsy sahy milaza aza aho hoe ratsy dia ratsy, miala amin'ny ramanavy miresaka adala aho; Tsy dia liana tamin'ny rafitra KISS fotsiny aho, mampihatra izany amin'ny programa fotsiny aho.
Izay lazainao fa izay manana rantsantanana sy mahay mamaky dia afaka, mihoa-pefy; manana rantsan-tànana ny dadako, afaka mamaky izy ary injeniera izy, ary na dia tsy mahazaka baolina amin'ny Windows aza izy ... mila faniriana sy fahalalana antonony farafaharatsiny ianao, ary miahiahy aho fa navelanao ho tonga lafatra i Arch, tsy misy olana , madio sy tsara amin'ny andrana voalohany, mila manandrana marobe ianao, mamaky zavatra sasany vao mianatra.
fa freebsddick dia avy amin'ny gentoo ka tsy nanana olana be loatra XDDD ...
olona tsotra iray dia matetika tsy mametraka ubuntu, maka sary an-tsaina ny fandaniam-potoana miaraka amin'ny andohalambo sy ny fametrahana azy amin'ny alàlan'ny tty XDD ...,. Handefa anao any amin'ny reconchichina izy, hilaza aminao fa aleo mahazo roa xD
Trisquel dia ny kinovan'ny Ubuntu navoakan'ny FSF, na dia manana PC misy chipset AMD na horonan-tsary NVIDIA na ATI / AMD ianao, safidio ny Debian Testing.
Hatreto dia gaga aho fa nosoloin'izy ireo tamin'ny Abrowser ny GNU IceCat, ary tsy azoko ny antony.
Nahita Arch iray gnuised koa aho antsoina hoe Parabola, izay tsy manana AUR, dia mampiasa ny kernel GNU / Linux-libre ary ny tranombokiny dia naseho tamin'ny fomba mitovy amin'ny Trisquel, na dia Iceweasel aza no ampiasain'ny Firefox fa tsy IceWasel.
Parabola dia Arch tsy misy AUR ?. Voafetra fotsiny ny distro, fa tokony nodiovin'izy ireo ny AUR fa tsy nesorina.
Parabola dia Arch tsy misy fonosana tompony, eny, saingy tsy miankina amin'ny AUR ny AUR. Ara-teknika dia tokony ho afaka mametraka ny fonosana AUR ao Parabola ianao raha toa ka mifanaraka amin'ny fiankinan-doha.
Malaza ratsy ny fahaizan'ny Arch amin'ny fonosany sy ny toerany. Manantena aho fa ny FSF dia tsy hanala ny taratasy fanamarinana distro 100% maimaimpoana tahaka ny nataony tamin'i Debian, satria ny toetrany dia saika nitovy.
Raha ny fahalalako azy dia lavitra tsy 100% ny andohalambo, manolotra fonosana fananana ao amin'ny trano fitehirizana mahazatra: flash, spotify, kernel tsy andoavam-bola sns.
Holatra dia hoy izy:
Trisquel no nozaraina sy toeram-piasana ankafiziko indrindra hatramin'ny nisedra 5.5 taona lasa izay ary niaraka tamin'ny 6.0 aho nanomboka ny volana martsa, inona no mbola angatahinao? Espaniôla izy io, tsy manana "famoahana horonantsary" manelingelina izay tiako sy eken'ny FSF sy i Stallman tenany. Mora sy tsotra ampiasaina.
Mamaly an'i Fungus
Ity ny pikantsary iray amin'ny birao misy ahy ao amin'ny Trisquel 6.0 Toutatis
somary mahonena izany latabatra izany
Misaotra anao, ary teny an-dalana Abrowser dia efa ao amin'ny kinova 21 fa raha niadana ny fanavaozana ny 22 izy ireo androany. Fa tsy misy tokony hatahorana.
Inona no Gnome ampiasainy?
satria ny Ubuntu 12.04 dia mampiasa gnome 3 ary ity dia toa ny gnome 2
mampiasa gnome 3 ..., namboarin'izy ireo ..., tsy misy compiz na zavatra hafa, raha tsy izany diso aho.
Mampiasa Gnome Fallback izy ireo
inona ny gnome 3 XD
Vao nametraka Arch Linux aho, raha ny marina dia maneho hevitra avy amin'ity fanaparitahana ity izay azoko lazaina, aorian'i Debian, ho ahy io no tsara indrindra .. Review ary ny hafa ho avy tsy ho ela ..
Tsy ratsy i Trisquel, fa toa efa fomba taloha kokoa noho i Debian izany ary mitandrema, ny fankasitrahako manokana fotsiny izany. Aza raisina ho ratsy.
Tena tsara, ho ahy tsy misy distro tsara kokoa, heveriko fa iray amin'ireo vitsy ireo izay mazava ny mpamorona momba ny fomba tokony hitondran'ny rafitra, tsotra, tsy misy fanampiana tsy ilaina, fonosana marobe, fahombiazana. Ary ilay fitenenana
"Ataovy ho an'ny console izay azonao atao amin'ny gui", ny fahombiazany bebe kokoa.
Na dia ny console mora ampiasaina indrindra aza dia ny Slackware, satria manampy anao rehefa manamboatra zavatra amin'ny tanana (amin'ny teny anglisy, mazava ho azy) ary manome ny fomba tsara indrindra hisorohana ny fikororohana.
Miaraka amin'i Arch, tsy maintsy namaky ireo zavatra tena ilaina izay notondroin'ny Wiki tamiko aho ary nahafantatra tsara ny fanovana rehetra momba ny rafitry ny fanavaozana na ny fanefana zavatra iray na hafa.
Ny tiako amin'ny arch (sy chakra) dia ny PKGBUILD sy pacman. Mora dia mora ny manao PKGBUILD anao manokana ary mampiasa kinova git.
Mitovy hevitra aminao aho …
itachi dia hoy izy:
Io Elav io, avelao ny tenanao ho voatarika noho ny hazavan'ny Crystal Linux. Hahafinaritra anao izany
Valio i itachi
Aza adino fa ny mpampiasa rehetra amin'ny fotoana sasany dia manana ny fotoanantsika hanao fanboy xD
Toa distro tena tsara izy io, na dia toa tsy distro tsara ho an'ny zaza vao teraka aza, misy fonosana fananana manamora ny fiainana.
Izy io dia manana ny installer Ubuntu antsoina hoe Ubiquitous, ary mifanaraka amin'ny Intel chipset (raha 99% Intel sy 1% Realtec ny birao). Ny tsy fantatro raha tsy misakana ahy tsy hametraka ny flash player ity navigateur vaovao (Abrowser) ity, satria ny gnash dia mandany fahatsiarovana bebe kokoa noho ny mpiara-miasa aminy ary tsy mifanentana amin'ny 100% amin'ny format flash.
Mazava ho azy fa hisy zavatra izay mifanaraka amin'ny fampiasana manokana anao izay tsy maintsy tadiavinao amin'ny sehatra manokana, angamba izany no fomba ahafahanao manatanteraka ny famahana ny olana mitranga ... fa araka ny nanamarihako azy teo Safidy maro tsy ampiasana amin'ny mahazatra fa manana tanjona mety tsy hitovy amin'izay eritreretinao izany.
vahiny dia hoy izy:
Toa kanto amiko ny kanto, maharary fa rehefa mametraka ny kanto amin'ny archlinux miaraka amin'ny xfce fa nanana bibikely roa. Ny sary masina dia, raha tsy diso aho dia be herim-po izy ireo, izay amin'ny gnome 3 dia toa tsara tarehy, izay ampiasako mpivady ho an'ny KDE ihany koa.
Faly aho fa saika izay rehetra naneho hevitra dia mampiasa ArchLinux. Mianatra zavatra betsaka ianao, tsy maninona ny manana boot roa miaraka amin'ny distro namana hafa toa an'i Ubuntu rehefa tsy te hianatra ianao dia ampiasao fotsiny.
Valiny amin'ny vahiny
mpampiasa-hafa-dl-fotsiny dia hoy izy:
Efa mieritreritra ny handao ny Arch Linux aho, satria tato ho ato dia tsy afaka manavao izany amin'ny "pacman -Syu", ao amin'ny tranonkala ofisialy dia milaza fa noho izy ireo nanao fanovana ny firafitry ny folder bin / sbin / usr / bin , avy eo mampiseho tutorial hamahana ilay olana izy ireo, saingy tsy mety amiko izany, narahiko tamin'ny taratasy ary rehefa te-hamerina aho, PUM !!!, maty ny Archko ary nandiso lesoka momba ny "init" rehefa mandroaka. (Soa ihany fa nanao backup tamin'ny clonezilla aho).
Ka eo no misy ahy amin'izao fotoana izao, tsy afaka manavao azy.
Nisy olona mitovy zavatra nitranga tamiko ve? Misy ny vahaolana?
Mamaly amin'ny mpampiasa hafa-dl-hafa fotsiny
Tsy afaka milaza ianao fa miala amin'ny Arch fotsiny noho ny olana iray, azo antoka fa niatrika zavatra ratsy kokoa ianao. Manana ny fanohanan'ny vondrom-piarahamonina iray manontolo ianao, midira amin'ny forum, lisitry ny mailaka, irc chat ...
Mandritra izany fotoana izany:
Mety ho mora kokoa noho ny noeritreretinao ny vahaolana arosonao.
Misaotra, hizaha toetra azy aho, fa izaho kosa aloha hanao backup amin'ny partition-ko, sao sanatria.
Efa ni-google ny momba an'io olana io aho fa tsy nahita na inona na inona, na tsy nahalala nitady azy, ka aza mieritreritra hoe kivy aho. ny zava-mitranga dia tato ho ato izay tsy nanam-potoana hanokanana ny tenako hahita ny vahaolana momba an'io aho, ary koa tsy te handratra ny arako indray aho.
Tsy ianao no olona voalohany manana olana lehibe amin'ireo ary milavo lefona, ara-dalàna izany, tsy mila manamboatra ireo zavatra ireo ny olona.
Ny distro voalohany nampiasa hitsin-dàlana fa tsy lahatahiry in / usr sy / lib, dia ny Fedora 17 Any tsy fantatrao akory hoe maninona no apetraka sy ampiasaina fotsiny. Ao amin'ny archlinux ny fanovana ny / lib dia nanomboka volana vitsivitsy lasa izay ary avy eo dia / bin. Ao amin'ny Ubuntu dia tsy misy tolo-kevitra hampiasana azy.
Fa tsy toy izany koa ny "tsy mila manamboatra ireo zavatra ireo ianao." Raha ny tena izy dia tsy mila mandeha manodidina ny fametrahana rafitra toy ny archlinux ny olona iray raha toa ny zavatra tadiavinao dia ubuntu. Safidio tsara ny distroo arakaraka ny filanao sy ny fahaizanao. Misy distro an-jatony.
Blazek dia hoy izy:
Imbetsaka aho no nanandrana izany fizarana izany ary nanana olana tamin'ny mpamily foana, satria mila rindrambaiko tsy miankina izy ireo. Raha ny marina dia tiako ireo tetik'asa rindrambaiko 100% maimaim-poana ireo, fa raha ny fahitako azy dia halako ny fihoarana mahery, na fizarana maimaimpoana 100% nefa avy eo tsy vitanao ny manao asa sasany satria mety hisy ny fametrahana rindrambaiko tsy miankina, saingy tsy tiako koa ny fizarana mihidy tanteraka fa tsy afaka manova azy ireo ianao.
Valiny tamin'i Blazek
SevillanaLinuxera dia hoy izy:
Manaiky tanteraka, manana olana mitovy amin'i Trisquel aho.
Valio ny SevillanaLinuxera
Miaraka aminao aho, nanana olana tamin'ny mpamily foana aho, satria mila rindrambaiko tsy miankina izy ireo.
Ny tsy hataoko dia ny mividy solosaina vaovao ho ahy.
Ho an'ny tanjona azo ampiharina, Trisquel dia maimaim-poana toy ny Windows.
Raha toa ka somary ivelan'ny sahan'ity lahatsoratra ity izay hevitrao .. Raha ny teôria dia heverina fa ity distro ity dia hihazakazaka amin'ny fakana fitaovana tsara ho toy ny foto-kevitra iray izay tohanan'ny fitaovana fa be dia be.
Nanapa-kevitra ny hametraka azy aho hizaha azy amin'ny solosaina finday taloha, saingy rehefa nametraka azy aho dia tsy maintsy nofafaiko, satria tsy fantany ny mpamily ho an'ny karatra sary na ny karatra tsy misy tariby. Ary ny tena marina dia mila rafitra fiasa miasa 100% aho. Ka niverina tany amin'ny Lubuntu 13.04 aho.
Raha misy olona manampy ahy ary milaza amiko ny fomba ahafahako miasa ny sary sy ny karatra tsy misy tariby nefa tsy mametraka rindrambaiko tompony aho, dia hisaotra azy ireo mandrakizay aho ary mety hanao ilay sidina mankany Trisquel.
Manoro hevitra an'i Debian stable aho. Nitafy ny ranomandry farany indrindra sy ny libreoffice aho (mety tsy ho hitako ny iray) fa ataoko avy any aoriana ilay izy ary dia izay. Araka ny tiako.
Ao amin'ny Debian ahy dia manao toy izany koa aho: tazomy ny Iceweasel sy LibreOffice (ity farany dia havaoziko amin'ny tanana miaraka amin'ireo fonosana ofisialy avy amin'ilay tranonkala iray ihany). Ny zavatra tsara momba ny Iceweasel dia ny Flash Player manaiky ahy ary miasa ara-dalàna toy ny hoe Firefox.
Tsy maintsy hanao toy izany koa amin'ny LibreOffice-ko, mbola eo amin'ny kinova 3.5.4 heh ... heh ... heh h
Ataovy izany, satria ny fampiasana ny dpkg ho an'ny libreoffice dia mahafinaritra kokoa noho ny fampiasana ireo repo, miampy mamonjy anao ireo fanavaozana 150 MB ao amin'ny sampana miorina.
Mahatsikaiky aho fa mamporisika ny debian (distro tsara) amin'ny rafitra iray nataon'ny orinasa Redmond
Ao amin'ny biraom-pifidianana amin'ity tranonkala ity sy an'ny mpandresy Windows iray hafa ho rafitra fiasan'ireo mpitsidika. Mampalahelo ahy kely izany ary nolazaiko imbetsaka. Somary diso izany, misy ny mialoka amin'ny hoe miasa izy ireo ary tsy afaka miova izy ireo, tsy fantatro izay hakamoana na lainga ratsy kokoa. Tsy tokony hiresaka bibikely amin'ny windows ianao ary hampiroborobo ny rindrambaiko maimaim-poana raha misakafo noho ny Windows ianao, satria mamitaka ny mpamaky amin'ny tontolo tsy misy.
Nefa mihamaro hatrany ny Linux ampiasaina amin'ny alàlan'ny fitaovana Android, ankoatry ny fahafatesan'ny Windows XP, maro amin'ireo mpampiasa Windows manana PC efa antitra no misafidy an'i Debian + LXDE na Lubuntu.
Raha ny marina dia mitombo hatrany ny isan'ny mpampiasa Linux. Raha tsy mino ahy ianao dia tadiavo ny "fanesorana ny angano 1%" dia ho hitanao hoe firy ny tena mampiasa Windows ary firy ny hafa mampiasa Linux hampiasaina any an-trano.
Chrome dia efa nanala ny Internet Explorer ho mpizaha tena be mpampiasa indrindra, satria izao dia tsy maintsy esorin'i Ubuntu ny Windows.
Manana Dual Boot aho, miaraka amin'ny Windows Vista sy Debian Stable. Amin'ity tranga ity dia naneho hevitra avy amin'ny Windows 7 aho satria manamboatra PC vahiny.
Tiako ny zavatra maro momba ny Trisquel: ny bika aman'endrika, ny fisafidianana ny fonosana, ny fahamarinan-toerana ... ny antsipiriany dia ny pc-ko manana singa manana fananana ary miaraka amin'ny fampiasako fonosana tompony sasany manakana ahy tsy hampiasa azy io feno.
Ankoatr'izay dia azoko lazaina fa distro be io, azo zahana avy amin'ny "install and use" afa-tsy ny antsipiriany vitsivitsy izay latsaka amin'ny resaka tsiro.
Mahaliana 😀 Tena tiako ny fisehoan'ity distro ity (tena mahonena)
Na dia amin'izao fotoana izao aza aho dia manambady an'i chakra linux sy elementos
Toa distro tena tsara amin'ny zavatra novakiako izany, saingy tsy manome zavatra tsy omen'ny hafa ahy izany. Ho an'ny purist dia tsy maintsy ho fahafinaretana izany.
OFFTOPIC: Mandra-pahitako olona mahalala Psycho-Pass 😛
Betsaka ny mahalala an'io anime io, rahateo, ho avy ny vanim-potoana faharoa
Fantatro, antenaiko ary tsara tahaka ilay voalohany izy io ary tsy manimba azy ireo. Hafahafa izany raha tsy i Makishima ho mpanohitra.
ho ahy raha mbola tsy mametraka yuri bebe kokoa izy ireo, ok daholo xd
Tsy mbola hitanao tsara ny fanadihadiana natao tamin'ny mpitsidika natao. Ny mitranga dia im-betsaka izy io, fantatra fotsiny amin'ny hoe Linux ao amin'ny mpandraharaha mpampiasa ary tsy maintsy manitsy an'io endri-tsoratra io ianao mba hametrahana ny distro ampiasainao.
Ny zava-misy izay tsikeraiko avy amin'ny Windows dia tsy midika hoe ampiasaiko matetika izy io, satria ireo tranga izay tsy maintsy hametrahako endrika PC ary indrisy fa mangataka Windows amiko izy ireo noho ny tsy fahalalàna misy ao amin'ny firenena onenako (Peroa), ankoatry ny miorim-paka lalina amin'ny rindrambaiko manana.
Ao amin'ny PC-nao dia manana Windows Vista SP2 sy Debian Wheezy ho dualboot aho, ho fanampin'ny fananana android ho finday marani-tsaina. Mampiasa Windows aho rehefa miasa ao CorelDraw, Adobe Premiere sy ny hafa, fa mampiasa Debian aho hivezivezena sy hiasa amin'ny antontan-taratasy Office amin'ny Kingston Office amin'ny fomba mety indrindra.
Ho fanampin'izay, ny fanehoan-kevitrao dia maneho ny tsy fandeferana amin'ireo mpampiasa izay manohy miasa miaraka amin'ny rindrambaiko tompona tsy fanatisme fotsiny, ho famporisihana anao ny tsy fandeferana amin'ireo mpampiasa izay tsy maniry hampiasa rafitra fandidiana hafa ankoatry ny Linux. Tsy izany no itondrana ny olona.
Marina izany. Tsy zakako ny olona mampiasa Windows amin'ny pejy Linux. Satria raha ny fahitako azy dia diso sy kamo izany (raha miasa izy ireo). Fa aza manahy, tsy mamaky fanehoan-kevitra amin'ny logo Windows aho mba tsy hifaneraserana. Misy karazan'olona sy firehan-kevitra isan-karazany, ary tsy milefitra amiko koa ianao. Nampiasa ny Linux ho rafitra lehibe hatramin'ny 2007 aho, tsy nahita ny Windows 7. Tsy manohana ny fampidirana ny Adware ao amin'ny Ubuntu koa aho ka tsy manome sosokevitra azy.
Fiadanam-po ary manana linden tsara kokoa XDDDDDD.!
Eny, tsara. Ary misy ratsy kokoa ao amin'ny forum esDebian.
Ny biraon'ny Kingsoft dia tsy miasa ho an'ireo miteny espaniola, satria tsy misy mpampitohy ho an'ny Espaniôla (anglisy na sinoa ihany), izay mahamenatra, satria manana endrika ivelany tena tsara sy mifanentana tsara amin'ny .doc sy powerpoint
Mikasika ny tsipelina diso, manampy betsaka ahy ny rakibolana RAE. Tsy hiankina amin'ny mpanamarina tsipelina mandeha ho azy foana aho.
Misy mahalala ny fomba hisehoan'ny fanehoan-kevitra avy amin'ny distro izay ataoko? Mampiasa chromium aho
karan-doha dia hoy izy:
Mamaly an'i Calaveran
Efa mety amiko io, narahiko ity lahatsoratra ity
ny mahasamihafa azy dia amin'ny alàlan'ny fanitarana 🙂
Iray hafa izay tsy miasa ho ahy… 🙁 Nidina indroa tamin'ny alàlan'ny Torrents aho ary indray mandeha ary tsy afaka nanao ny ISO hiasa ho ahy, tena tsy dia fahita firy fa 2MB daholo ny lanjan'izy ireo ?? ?
Eny, tsy hanizingizina intsony aho…, nampidina ny Netrunner 13.06 aho hanandramana ary tena tiako ny vaovao entiny, fa Kubuntu no tiako indrindra ihany. 🙂
Ny kinova LXDE no tsara indrindra amin'ity GUI hitako ity.
Misy mahalala momba ny fampiasana (playback video, audio, programa sns) ahoana ny fianan'ny mpampiasa?
Isaky ny maneho hevitra aho dia mitovy amiko no mitranga, tsy ho eto no misy azy
Afaka naka azy io ihany aho tamin'ny farany ary nandrakitra an'io tamin'ny CD azo novakiana ... (696 MB) Notsapaiko mivantana izany ary tiako ny fisehoany sy ireo fonosana entiny, fa ny olana dia tsy mahita ahy ny wifi ary tsy misy an'izany ... mangatsiaka ... ary tsy haiko raha afaka mampiasa divay ho an'ny programa amin'ny fampiasana matihanina izay mbola tsy misy mitovy amin'ny GNU / Linux aho ... fa napetrako amin'ny lisitra fiandrasana mandritra ny andro vitsivitsy io Mankaleo ahy amin'ny KDE.
Manana izany olana izany koa aho. Tsy mahita ahy ny wifi, noho izany tsy dia mamokatra loatra ny fampiasana solosaina finday miaraka amin'i Trisquel. Io no manakana ahy tsy hampiasa an'io distro io.
Mety misy modules maro izay tsy tohanana amin'ny distro noho ny antony mazava .. ny modules ilain'izy ireo miasa dia misy firmware mikirakira azy .. na dia mazava ho azy aza raha lazainao amiko fa tsy mahafantatra anao tsotra izao izy dia mety ho fahamarinana antsasaky ny sasany. . !! Azonao atao ny mandingana ny mpanamboatra fitaovana na fampahalalana bebe kokoa amin'ny fivoahan'ny dmesg sy lsub ao anaty terminal .. mety mila manova ny rafitra ianao hampiakarana ny interface. im-betsaka isika no mila miditra an-tsehatra mba hahafahantsika manao zavatra ao anatin'ny rafitra.
trisquelcolombia dia hoy izy:
Tena tiako ny trisquel, hanipy pc ao an-tranoko taloha izy ireo ary nametraka livecd trisquel fotsiny mba hanaovana lspci ary hitako fa ny wifi dia mahatsikaritra azy ho azy XD tsy ny rehetra no maniry fahalalahana, misy olona mila fatotra ny miaina, tiako kokoa noho ny fahalalahana mihoatra ny zava-drehetra
Mamaly an'i trisquelcolombia
Ahoana ny fomba fampidinana mozika avy amin'ny Groovehark amin'ny Linux
Fedora 19 misy